Io milina mandeha ho azy dia fitaovana nampiasaina mba hivarotra sakafo. Mampiasa milina manontolo sakafo-kilasy fitaovana mifandray amin'ny sakafo, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sakafo ny fahadiovana firenena isan-karazany.
Ary amin'ny alalan'ny fiovam-po matetika stepless fanaraha-maso haingana, mora ny hianatra sy mora miasa,
Filamatra ampiasaina amin'ny orinasa salantsalany sy lehibe.
Io milina no manokana amin'ny famokarana ny siomai modely, mora ny miasa sy madio
Tsy mila manao koba, fotsiny hametraka ny koba sy mameno any an-siny sy ny Hala-siny, ary avy eo dia miteraka siomai ho azy, ny milina dia afaka mamorona teti-tena ny koba sy ny asa fanaovan-gazety, Peel, notapatapahina, ary fenoy. Ary miantso azy amin'ny conveyor fehin-kibo mba hamita azy io indray mandeha.
Ny vokatra no tsara miendrika tanana
Ny hatevin'ny ny hoditra sy ny habetsaky ny famenoana azo ahitsy araka ny fepetra mpanjifa.
Ny Hopper dia mora ny disassemble sy madio.
Ny e natao ny UHEWPE ary mora ny madio.
Ny hatevin'ny ny hoditra dia mety ho toy ny ambany toy ny 1mm
Ny milina fanadiovana dia afaka mampiasa rivotra dipoavatra basy mba hanadio ny rafitra fanaovana hoditra, ary avy eo dia hanala ny hoditra fanaovana rafitra sy ny Rotary vilia namorona rafitra mba hampiasa ny rano fanadiovana
Model karazana BK-780
Product lanja 12g, 15g, 20g, 25g, 30g
fahafahana 6000pcs / h
Ny sakan'ny wrapepr 55mm, 60mm, 65mm, 70mm
Machine lanja About 800kg
Lafiny (L * W * H) 1350 * 1200 * 1700mm
spees adjiust amin'ny transducer 2pcs
Rafitr'ity tontolo ity maika-roller 2-roller
forming fomba 2pcs amin'ny fotoana
Previous: mandeha ho azy Tokyo akondro milina fanaovana mofomamy
Next: Automatic fanariam soanambo Bun forming milina
Extrusion Sakafo Machine
Shaomai Manao Machine
Shumai Manao Machine
Siomai Manao Machine
Automatic fanariam soanambo Bun forming milina
Automatic fanariam samosa milina fanaovana
Manasa-mandeha ho azy atody tarta forming milina
Automaticn dibera mofomamy depositor